အရမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျလွန်း နေပြီး မိမိုက် လွန်း နေ တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / အရမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျလွန်း နေပြီး မိမိုက် လွန်း နေ တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို
အရမ်း ကို ဆက်ဆီ ကျလွန်း နေပြီး မိမိုက် လွန်း နေ တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို
By Shwe BaPosted on November 14, 2020 November 14, 2020
photo မော်ဒယ်လ် အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ photo မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။.
ယခု အခါ မှာ လည်း ပိုက်ဆံရှိ ဖို့မ လိုဘူး မောင်လေး ရှိရင် …. အမှိုက် ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ်နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာဖြစ်ပါ တယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင် ခဲ့ တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိပါတယ်။
သူမ က တော့ ယခုမှာ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေ ခဲ့ ပါတယ်။ သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ်အမှူးရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြန် လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ် ။
photo မျောဒယျလျ အမှူး က တော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျ လကျြ ရှိနတေဲ့ photo မျောဒယျလျ တဈယောကျဖွဈပွီး ခဈြစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေး တှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျကို တငျပေးလရှေိ့တဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ။အမိုကျစားဖကျရှငျလေးတှေ အလနျးစား ဖကျရှငျ လေးတှေ ကို ဝတျဆငျလရှေိ့ပွီး ခဈြစရောကာငျးလှနျး တဲ့ အပွုံးလေးတှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားနိုငျခဲ့ တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေး မှု ကို အခိုငျအမာ ရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ photo မျောဒယျလျ တဈယောကျ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။.
ယခု အခါ မှာ လညျး ပိုကျဆံရှိ ဖို့မ လိုဘူး မောငျလေး ရှိရငျ …. အမှိုကျ ကောကျရလဲ ဖဈတယျနျော ဆိုပွီး ပုံလေးတှကေို မြှဝထေားတာဖွဈပါ တယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုရော မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုပါ အခိုငျအမာရယူထားနိုငျ ခဲ့ တဲ့ သူမကတော့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှရေဲ့ ရှကေို့ ခပြွလရှေိ့ပါတယျ။
သူမ က တော့ ယခုမှာ အသညျးယား လောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးနတေဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျကို လှုပျခပျသှားစေ ခဲ့ ပါတယျ။ သူမရဲ့ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနခေဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှေ ပိုစခေဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ မျောဒယျအမှူးရဲ့ ကွှလေောကျစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှေ ကို ပွနျ လညျဖျောပွ ပေးလိုကျ ပွီး အဆိုပါ ပုံရိပျလေးတှေ ကို အောကျမှာ ကွညျ့နိုငျ ပါ တယျ ။
Previous post နေ့ခင်း ဘက်ကြီး ကားတံခါး ဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံ အိတ် အလုခံ လိုက် ရတဲ့ မယ်လိုဒီခေါင်
Next post ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက် စား ပုံစံလေး နဲ့ အမြင်ဆန်း အောင် ရိုက် ထားတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း ရဲ့ ဗီဒီယို